5 ခံစားကြည့်ပါရန်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးငါးဖမ်းနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ခံစားကြည့်ပါရန်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးငါးဖမ်းနေရာများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 16/01/2021)
အတော်လေးငါးဖမ်းတူသောဘာမျှမယ့်နေရာအသစ်အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ရှိတယ်. မည်သည့် angler များအတွက်, အယောင်ဆောင်ရှိမရှိသို့မဟုတ်အပြည့်အဝ အတှေ့အကွုံ, ငါးဖမ်းသူတို့ကိုအနားယူကူညီပေးသည်တဲ့အဖိုးတန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်. အဘယ်အရာကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး pastime ပေါင်းစပ်ပြီးထက်ထိုသူတို့အဘို့ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်?
ကံကောင်းထောက်မစွာငါးဖမ်းပျော်မွေ့သောသူတို့အဘို့, ရှိပါတယ် ဥရောပ၌ကြီးသောသောနေရာများ ငါးအမျိုးမျိုးပါရှိပါတယ်. သငျသညျဆိုရင် သင်၏နောက်အားလပ်ရက်စေရန်စီစဉ် အားလုံးငါးဖမ်းအကြောင်းကို, ကျနော်တို့ရှိရာသွားကြဖို့သင်ဆုံးဖြတ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းမှာကြည့်ကြပါစို့5ခံစားရန်ဥရောပအကောင်းဆုံးငါးဖမ်းနေရာများ:
သငျသညျဆွီဒင်အတွက်ငါးမျှားချင်လျှင်, သငျသညျအများကြီးနောက်ထပ်ထက်ကိုကြည့်စရာမလိုပေ စတော့ဟုမ်း အကြီးငါးဖမ်းနေရာ. ဥပမာ, Stromgatan မြို့အလယ်၌တရားဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့တစ်ဦးရှိပါတယ် ကြီးမြတ်အမြင်. သငျသညျဆှီဒငျပါလီမန်အဆောက်အဦကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အဆိုပါဟောငျးမြို့ ငါးဖမ်းစဉ်. နောက်ထပ်မြို့ပြရာအရပျ Hammarby အိုင်ပေါ်မှာ Hammarby Sjostad ဖြစ်ပါသည်, စတော့ဟုမ်းအတွက်လူကြိုက်များရပ်ကွက်အတွင်း. ဒါဟာအကြီးငါးဖမ်းသောနေရာများအများအပြားရှိပြီးတမြို့လုံးကနေအလွယ်တကူဖြစ်ပါသည်.
သို့သျောလညျး, သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောဂန္သဘာဝငါးဖမ်းအတွေ့အကြုံကိုချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျဝေးစတော့ဟုမ်းကနေမောင်းထုတ်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်. Ringsjon ရေကန်သင် whitefish နှင့်သက်တံ့ရောက်ရေချိုငါးကိုဖမ်းနိုင်ပါတယ်ရှိရာအချို့အဆင်းလှငါးဖမ်းသောအရပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်း. Drevviken စတော့ဟုမ်းနီးစပ်သူအခြားတိတ်ဆိတ်ရေကန်ဖြစ်ပါတယ်, Ringsjönဆင်တူ. တစ် ဦး ကကြီးမားတဲ့နှင့် ရေရှည် ငါးမျှားရန်နေရာ, Drevviken ရေကန်ကိုသင်စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်.
သင်ကစတော့ဟုမ်းကျွန်းစုများနှင့် Galo ကျွန်းဖို့လည်းခေါင်းနိုင်, စစ်မှန်သောအထီးကျန်ပရဒိသုရာဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏နှလုံးရဲ့အကြောင်းအရာအဲဒီမှာတပ်နှင့်ငါးနိုင်ပါတယ်, ကျွန်းစုရဲ့သဘောသဘာဝခံစား.
ပြင်သစ်လှပတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်အကြောင်းကိုမဆိုလှုပ်ရှားမှုများအတွက်, ဒါကြောင့်ပြင်သစ်တွင်အံ့ဩစရာမရှိငါးဖမ်းလည်းကြီးလှပေရဲ့. အထင်ရှားဆုံးငါးဖမ်းနေရာများကိုတစ်ခုမှာလက်ခ် du Bourget ဖြစ်ပါသည်, ပြင်သစ်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးမြို့မှာရေကန်. ကျော်ရတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတစ်ဦးအထင်ကြီးရာအရပ်ကိုင် 30 ငါးမျိုးစိတ်. သူတို့ထဲတွင်, ထရောက်ရေချိုငါး, zander, ပိုက်, နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းထွက်မတ်တပ်ရပ်. အိုင်အမှန် Rhone-အဲလ်ပ်တောင်တန်းဒေသတစ်ရတနာဖြစ်ပါသည်.
ထိုအခါ Bassin d'Arcachon တောင်ဘက်-အနောက်ပိုင်းအပေါ်လည်းမရှိ ပြင်သစ်ကမ်းခြေ - ရေငန်ငါးဖမ်းပျော်မွေ့သောသူတို့အဘို့. တင့်တယ်နေထွက်, ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ရေ, နှင့်ပင်လယ်ဘေ့စ် Arcachon တွင်သင်မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်အရာအချို့ဖြစ်သည်.
ပြည်ပမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေ angler ရေကန် Der-Chantecoq, အဆိုပါရှန်ပိန်ဒေသ၏စိတ်နှလုံး၌တရား, မှအတော်လေးနီးစပ် ပဲရစ်. ဒါဟာအကြီးဖွင့် အစပြုသူများနေရာ, အဟောင်းကိုအပြစ်တွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီကြီးငါးကြင်းအိုင်မကြာခဏပေမယ့်. အခွားသောမှတ်သားလောက်သောပြင်သစ်သောနေရာများ, La Rance မြစ်နှင့် Alder ပါဝင်သည်. အလွန်ကြီးစွာသောနေရာများသည်သင်၏ယူအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးလူကြိုက်များ မိသားစု တစ်ဦးငါးဖမ်းခရီးစဉ်အပေါ်.
ဘယ်အချိန်မှာအီတလီနိုင်ငံ, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာဥရောပအကောင်းဆုံးငါးဖမ်းသောနေရာများအချို့ကိုရှာစေခြင်းငှါ,. သည် Le မတ်လဒေသအချို့အကြီးငါးဖမ်းကမ်းလှမ်း, အထူးသဖြင့် Cingoli မှာ, Pioraco, နှင့် Sefro. သူတို့ဟာအချို့င် အလှဆုံးအီတလီရေကန်များ ငါးဖမ်းများအတွက်, ရောက်ရေချိုငါးင်, ပိုက်, နှင့်ငါးကြင်း, သည်အခြားမျိုးစိတ်အကြား. သို့သျောလညျး, အခါရေကန်များထံသို့မရောက်ရ, ရေကန် Como လည်းရှိပါတယ် မြောက်ဘက်ကိုတက်, ယင်း၏ပိုက်နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းနှင့်အတူ.
ရဲ့အကြီးမားဆုံးအီတလီမြစ်အကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မစို့, အဆိုပါဖိုး. ဒါဟာမဆို angler သွေးဆောင်မယ်လို့ကုမ္ပဏီကြီးငါးခူနှင့်ကြီးမားသောငါးကြင်းရတာဟာ. Tuscany အတွက်, မြစ်တို့သည်အထင်ရှားဆုံးငါးဖမ်းသောနေရာများဖြစ်ကြသည်. လီမာနှင့်ဆန်ခါရောက်ရေချိုငါးများနှင့် grayling များအတွက်ငါးမျှားဖို့အကြီးအနေရာများ.
ပွင့်လင်းသောရေပေါ်မှာငါးဖမ်းပိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေကို angler များအတွက်, အီတလီမှာကွီးနှစျငါးဖမ်းသောနေရာများရှိပါသည်. အဆိုပါ Egadi ကျွန်းများ စစ္စလီကျွန်းနှငျ့ဆာဒီနီးကမ်းရိုးတန်းနှစ်ခုစလုံးဟာသူတို့ရဲ့အလှအပနှင့်သူတို့ပေးငါးဖမ်းများ၏အရည်အသွေးအားဖြင့်သင်တို့ကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါလိမ့်မယ်. မြေထဲပင်လယ်အတွင်းအပြာရောင်-တောင်တူနာငါးနှင့်အဘိဓါန် Sicilian- swordfish ရှာဖွေပါ, နှင့်ပယင်း-jack ကို, snapper, နှင့် Tyrrhenian ပင်လယ်တွင် Garrick.
မီလန်ရေကန် Como မှရထား
တူရင်ရေကန် Como မှရထား
Padua ရေကန် Como မှရထား
ဗင်းနစ်ရေကန် Como မှရထား
အဆိုပါ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ကျွန်းသူကျွန်း၏ unspoiled ရိုင်းအလှအပအတွက်အချို့သောအကြီးငါးဖမ်းသောအရပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်း. သငျသညျအံ့သြဖွယ်ဖမ်းချင်လျှင်, ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်သင်တို့အဘို့, လက်ျာရာအရပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့်အရာရာအရပျသငျသညျကောက်သင့်တယ်?
Dartmoor ရှိအထင်ရှားဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, Devon. ထိုကဲ့သို့သော evocative နာမည်, သငျသညျမှောငျမိုကျမြစ်ရေအတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ငါးဘို့ငါးဖမ်း၏အတွေ့အကြုံစိတ်ကူးရန်ပျက်ကွက်လို့မရပါဘူး. Northumberland အတွက်မြစ် Tyne သင်တစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အရောင်ရှိပါတယ် ကွဲပြားအားသာချက် အဲဒီမှာနေထိုင်နေပင်လယ်ကိုရောက်ရေချိုငါးဆန့်ကျင်. ဒါကနေ့ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်အကြီးမားဆုံးပင်လယ်ရောက်ရေချိုငါးဖမ်းဘို့ဤမြစ်စုံလင်သောစေသည်.
၏နယ်စပ်မြစ် Clettwr နီးစပ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နှင့်ဝေလနယ်စွန့်စားမှုအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးရာအရပ်ဖြစ်မယ့်. သငျသညျကြမ်းတမ်းရေထဲမှာသင့်ရဲ့ဖမ်းဘို့ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမျှထပ်မံမကွညျ့. အခြေအနေကအတန်ငယ်ဖြစ်ပါသည် ပိုပြီးသုံးစွဲနိုင် တွင် Strangford Lough, ကောင်တီ Down. ဒါဟာ mackerel နှင့်အတူဂါဇံဗြိတိန်ရဲ့အကြီးဆုံးပင်လယ် Loch င်, Pollock, နှင့် haddock, အခြားသူတွေအကြား.
Assynt အပေါင်းတို့၏အများဆုံးအံ့ဖှယျရာအရပ်ဖြစ်လိမ့်မယ် - ကြီးတွေအောက်မှာအလတ်စား တောင်များ, ရေငန်နှင့်ရေချိုနှစ်ဦးစလုံးငါးဖမ်း options များနှင့်အတူ. Fionn Loch ဇာတိအညိုရောင်ရောက်ရေချိုငါးဘို့ငါးမျှားနေတဲ့ကြီးမြတ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ဂျာမနီ ဆက်ဆက်ဥရောပအကောင်းဆုံးငါးဖမ်းနေရာများကိုစာရင်းအပေါ်နေရာမှထိုက်တန်ပါတယ်. ဤမျှလောက်များစွာသောနှင့်အတူ ကြီးမားသောမြစ်များ နှင့်ရေကန်များ, ထိုသို့စာရင်းလုပ်မပြုခဲ့လျှင်အံ့ဘွယ်သောပါလိမ့်မယ်. ဂျာမနီမှာငါးမျှားများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာများတွင်၏အချို့တို့ပါဝင်သည်ရန်ရှိသည် အဆိုပါညု ဧရိယာ. ထဲမှာ 8 ရှည်လျားသော Bavaria ညုဧရိယာကီလိုမီတာ, သငျသညျငါး၏ကျယ်ပြန့်မတူကွဲပြားမှုကိုဖမ်းနိုင်ပါတယ်.
ပိုပြီးမြစ်ငါးဖမ်းများအတွက်, အဆိုပါရိုင်းနှင့် Elbe, အထူးသဖြင့် Baden-Wurttemberg နှင့် Saxony-Anhalt မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ, လိုအပ်သလို, အတွေ့အကြုံအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျအိုင်ငါးဖမ်းပိုနှစ်သက်ပါလျှင်, အိုင် Chiemsee နှင့်ရေကန် Starnberg အမြဲရှိပါတယ်. နှစ်ဦးစလုံးအတော်လေးနက်ရှိုင်းများမှာ, ပိုက်၏ပဒေသာနှင့်အတူ, ထရောက်ရေချိုငါး, နှင့် bream.
တစ်ခုယားနာနှင့်အတူအားလုံး angler များအတွက် ခရီးသွားရန်, သူတို့ရဲ့ကွီးနှစျမေတ္တာပေါင်းစပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. ဥရောပကိုကြီးစွာသောဖမ်းစေသောနေရာများအများအပြားကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် သဘာဝကိုခံစား ရောနှောနှင့်စည်ကားမြို့ကြီးများ.
မြူးနစ် Passau မှရထား
Nuremberg Passau မှရထား
Passau မှ Salzburg
သငျသညျအခြို့သောအလွန်ကြီးစွာသောငါးဖမ်းတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, အလွယ်တကူများများရှိပါတယ်5ခံစားရန်ဥရောပအကောင်းဆုံးငါးဖမ်းသောနေရာများ. သင်သည်ရေ hit ဖို့အဆင်သင့်တယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် ယခုပြန်မကြည့်ဘူး!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ခံစားကြည့်ပါရန်ဥရောပအကောင်းဆုံးငါးဖမ်းနေရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-fishing-places-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ငါးဖမ်း #traveleurope europetravel trainjourney travelgermany traveltips